Asian Transformative Pharmaceutical Zvigadzirwa Kambani Zvidzoreso
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Asian Transformative Pharmaceutical Zvigadzirwa Kambani Zvidzoreso
Everest Medicines ("Everest" kana "Company"), kambani yebiopharmaceutical yakatarisana nekugadzira nekutengesa zvigadzirwa zvemishonga zvinogadzirisa zvinonetsa zvisingaite zvinodiwa nevarwere muAsia, nhasi yazivisa kuti yatengazve 1,095,000 migove yakajairika yakaenzana neHK $50 miriyoni. mumusika wakavhurika munguva kubva Gumiguru 4, 2021 kusvika Gumiguru 29, 2021, paavhareji mutengo weHK$45.63 pachikamu. Tsanangudzo yemunhu ega yekutengeserana inowanikwa muchikamu chemuridzi wewebhusaiti yeKambani.
Kutenga patsva kwakaitwa pasi pechirongwa cheHK$100 miriyoni chekutenga patsva chakaziviswa uye kushanda kubva Nyamavhuvhu 30, 2021. Pamutengo wemugove wazvino, Kambani inotenda kuti masheya ayo ari kutengeswa nemutengo wakaderera kune kukosha kwazvinoita, uye inogona kuramba ichitenga patsva musika wakavhurika. Iyo Kambani yakazvipira zvizere kugadzira kukosha kune vanogovana uye ine chivimbo chakasimba kune yayo ramangwana. Kubva munaChikumi 30, 2021, Kambani yaive nemari inosvika RMB3,971.0 miriyoni nemari yakaenzana.
Kambani ichaita chero chikamu chekutenga patsva ichiteedzera memorandamu uye zvinyorwa zvekubatana kweKambani, Mitemo Inotonga Kurongeka kweSecurities paThe Stock Exchange yeHong Kong Limited, Makodhi eKutora uye Kubatanidzwa uye Kugovera Buybacks, Mutemo weMakambani we. iyo Cayman Islands nemitemo yese inoshanda nemirairo iyo Kambani iri pasi payo.